चीनको चंगुलबाट नेपाललाई मुक्त गराउन भन्दै भारतीय गुप्तचर प्रमुख काठमाडौं आएको दाबी::Best Online News Portal of Nepal
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच भेटवार्ता भएको बिषयमा ओलीले कुटनीतिक मर्यादा नाघेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। गोयल बिहान सवा १० बजे दिल्ली फर्किसकेका छन्।
भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरावणे कात्तिकको तेस्रो साता तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आएका थिए ।
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत सम्मिलित नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । भारतसँग नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने क्रममा गोयलको आकस्मिक भ्रमण भएको स्रोतको भनाइ छ ।
गोयलको भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक क्षेत्रमा बिरोध भएको छ । यता भारतीय मिडियाले भने नेपाललाई चीनसँगको चंगुलबाट मुक्त गराउन गोयलको भ्रमण भएको दाबी गरेका छन् ।
भारतीय मिडिया रिपोर्ट अनुसार एकातिर भारतले पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चीनसँग गतिरोध सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ, नेपाल -भारत सीमाबाट कठिनाइहरू भएका छन् । नेपालको वामपन्थी सरकारले चीनको पक्ष मात्र लिएन, उसको इशारामा धेरै एकतर्फी निर्णय पनि गर्‍यो जसले भारतको लागि कठिनाइहरू सुरु भएको छ ।
यद्यपि भारतले नेपालको अचानक परिवर्तन भएका नीतिहरू बुझ्न हिचकिचाएन। नेपाल सरकारले मनमानी ढंगले एकपक्षीय निर्णय गर्नुमा चीनको हात रहेको भारतको स्पष्ट विचार छ। यसैबीच, ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। गोयलले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय बैठकहरू गरेका थिए। गत वर्ष जुनमा उनको नियुक्ति पछि नेपालको यो दोस्रो भ्रमण हो।
सेना प्रमुख एमएम नरावणेको सम्भावित भ्रमणको क्रममा यसबारे छलफल हुने विश्वास छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट रक्षा मन्त्रालय फिर्ता लिई भारतलाई सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। पोखरेल भारत विरोधी मानिन्छन् । यद्यपि भारतले सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले नरम वातावरण बनाउनु पर्छ।
ओलीमार्फत राजसंस्था स्थापना गर्ने भारतीय गुप्तचर संस्थाको योजना, प्रचण्डले पाए चाल !
भारतीय जासुसले मोदीको दुत बनेर ओलीलाई भेटेको दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘रअ’का प्रमुखले भेटेको पुष्टि
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख गोयलबीच २ घण्टा गोप्य वार्ता
प्रचण्डद्वारा ‘रअ’ प्रमुखलाई भेटेको आरोप अस्वीकार
इन्डियन एयरफोर्सको जहाज ‘रअ’ प्रमुखलाई लिएर २१ घण्टापछि फर्कियो
भारतीय गुप्तचर प्रमुखको त्यो रुप ,भोटर आइडी कार्ड देखाएर नेपाल प्रवेश
अकस्मात काठमाडौं ओर्लिएका भारतीय गुप्तचर प्रमुखले क-कसलाई भेट्दैछन् ? भोली बिहान फर्कदै
अकस्मात किन काठमाडौंमा ओर्लिए भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख ?
गणतन्त्र पक्षधर एकताबद्ध हुन राष्ट्रिय जनमोर्चाको आग्रह
सांसद श्रेष्ठको प्रश्न – कागती बेचेर पौडेलले कसरी बोहोराटार र लण्डनमा महल ठड्याए ?
प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाको पुत्ला दहन
सांसद भएपनि किसान श्रेष्ठ बिचौलिया ठेकेदार हुन : प्रदिप पौडेल